तिहारको मुखमा पदमले गुमाए कुवेतमै ज्यान, काम गर्दागर्दै भुइँमा लडेका पदम उठेनन् ! – ताजा समाचार
तिहारको मुखमा पदमले गुमाए कुवेतमै ज्यान, काम गर्दागर्दै भुइँमा लडेका पदम उठेनन् !
काठमाडौँ – कुवेतमा एक नेपालीको ज्या’न गएको छ । ज्या’न जानेमा भोजपुरका ३९ वर्षीय पदम बहादुर मगर रहेका छन् । काम गरिरहेकै अवस्थामा पदमको ज्या’न गएको बताइएको छ । रोजगारीका लागि ६ महिना अघिमात्रै कुवेत गएका मगर आरआईसी कुलेक्स कम्पनीमा कार्यरत थिए।
काम सधै फर्कने समयमा नर्फकेपछि खोजी गर्दा उनी कम्पनीको कार्यस्थलमा भुँईमै लडेको अवस्थामा भेटिएका थिए। उनको निधनको कारण खुल्न नसकेको बताइएको छ । घटनाबारे जानकरी पाए लगत्ते कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस तिहारको मुखमा ३ दाजुभाई को ह’त्या, श्रीमती फरार भएपछि प्रहरीले खोज्दै !